केयूले एमबिबिएस शुल्क बढाएपछि डा.... :: सुदीप श्रेष्ठ :: Setopati
सोमबार, असोज २९, २०७५
केयूले एमबिबिएस शुल्क बढाएपछि डा. केसीद्वारा असोज २० बाट अनसन घोषणा
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असोज ३
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सरकारी निर्णय अटेर गर्दै आफूखुसी शुल्क तोकेपछि डा. गोविन्द केसीले चारबुँदे माग राख्दै यही असोज २० गतेदेखि बाह्रौं चरणको अनसन घोषणा गरेका छन्।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग जथाभाबी शुल्क लिन थालेको भन्दै डा. केसीले आन्दोलन गरेपछि सरकारले अघिल्लो वर्ष शुल्कसीमा तोकेको थियो। एमबिबिएसतर्फ काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र काठमाडौं बाहिरकालाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सीमा तोकिएको थियो। बिडिएसतर्फ सबै मेडिकल कलेजमा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ लिने भनिएको थिगयो। २०७३ मंसिर १९ गतेको निर्णयअनुसार तय उक्त शुल्क नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पनि कायम छ।
केयूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आफूखुसी शिक्षण शुल्क तोकेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीले अन्य मागसमेत समावेश गरी अनसन घोषणा गरेका हुन्। उनी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध पाँच वर्षदेखि आन्दोलनरत छन्।
‘एमबिबिएसका लागि सरकारले तोकेभन्दा दसौं लाख बढी शुल्क अवैध रूपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकेबमोजिम कायम गरियोस्,’ डा. केसीद्वारा जारी मंगलबार विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसपालि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाको बेथितिका अतिरिक्त आयल निगमको जग्गा प्रकरण पनि उठाएका छन्। जग्गा प्रकरणमा मुछिएर बर्खास्त गरिएका आयल निगम प्रमुख गोपाल खड्कामाथि छानबिन गरी हिनामिना बराबर रकम असुल गरी कारबाही गरियोस् भन्ने उनको माग छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ३, २०७४, ०६:२४:१३